तपाईको एनालिटिक्समा शंकास्पद यातायात देखी? - Semalt के गर्ने भनेर सोध्नुहोस्
जूलिया वाश्नेभा, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, विश्वास गर्दछ कि darodar.com मुख्य कारण हो किन तपाईंको वेबसाइट धेरै रेफरल ट्राफिक प्राप्त गरिरहेको छ, र फोरम.टप्टिक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सएक्सनोडार.कम आउँदै गरेको दिनमा इन्टरनेटमा तपाईंको साइटको प्रतिष्ठा बिगार्न सक्छ। यसैले यस समस्याबाट छुटकारा पाउन तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्छ। के यो तपाईको पेटको वृत्ति हो? यो सत्य हो कि तपाईंले प्रतिलिपि गरेर आफ्नो वेब ब्राउजरमा टाँस्नुभयो। नतिजाको रूपमा, यसले तपाइँको लागि समस्या खडा गर्‍यो र तपाइँलाई एलीएक्सप्रेस पृष्ठहरू (अलीबाबाको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी) मा ल्यायो। यहाँ तपाईं छुट्टि वस्तुहरू र छूट प्रस्तावहरू एक महत्वपूर्ण संख्या मा देख्नुहुनेछ।
जब वेबमास्टर उपकरणमा निर्दिष्ट सन्दर्भकर्ता क्लिक गर्न आउँदछ, यसले तपाईंलाई darodar.com मा लैजान्छ, तपाईंलाई iloveitaly.ru को रूपमा रूसी वेबसाइटमा पुनः निर्देशित गरेर। यस पछि, तपाईलाई एलिप्रेसप्रेस सबडोमेनमा रिडिरेक्ट गरिनेछ जुन अन्तमा विशिष्ट तारहरू छन् "aff_platform = aaf & sk = YNRjYvfmq: & cpt = 1420754856013 & null ;."
के तपाई यसको अर्थ जान्न चाहानुहुन्छ? यसको मात्र मतलब यो छ कि तपाईंको कम्प्यूटर ह्याक गरिएको छ र तपाईंको वेबसाइट darodar.com रेफरल ट्राफिक प्राप्त गर्दैछ। जब तपाईं केहि प्रोग्राम र सफ्टवेयर खरीद गर्नुहुन्छ, परिणाम अपेक्षित हुने छैन र रेफरल ट्राफिक तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा देखिनेछ। एक ह्याकरले तपाईको वेबसाइटमा कम-गुणवत्ता ट्राफिक ड्राइभ गर्न कोशिस गरिरहेको हुन सक्छ भन्ने आशामा कि कसैले उल्लेखित लिंकहरूबाट उत्पादनहरू किन्नेछ। कसरी ह्याकरहरूले तपाइँको जानकारी चोर्यो र तपाइँको गुगल एनालिटिक्स मा पुगे? सरल उत्तर हो कि तिनीहरूले ट्राफिक नक्कली बनाए। त्यहाँ धेरै ट्राफिक फकर स्क्रिप्टहरू स्प्यामरहरू हुन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई छल गर्नका लागि प्रयोग गर्दछ, तिनीहरूलाई दुर्व्यवहारपूर्ण ट्रैफिक पठाउन अनुमति दिँदै र तपाईंको साइटको प्रतिष्ठा बिगार्न। तपाईले ती गुगललाई एनालाइटिक्समा ती झूटा रेफररहरू प्राय: जसो उनीहरूले देख्नेछन् किनभने उनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई र गुगल घडीको बिचमा छल गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा, तपाईंको साइटमा प्रवेश गर्न कोशिस गर्दै आएका ह्याकरले आफ्नो लिंकमार्फत केहि बेच्न सक्नेछ र धेरै राजस्व उत्पन्न गर्न सक्दछ। दुर्भाग्यवस, बजारहरूले darodar.com रेफरल ट्राफिक र नक्कली सफ्टवेयरको प्रयोग तपाइँका उत्पादनहरूको प्रचार गर्नका लागि गर्दछन्। तिनीहरू आफ्ना आगन्तुकहरूलाई ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न र धेरै तरिकामा उनीहरूलाई ट्रिक गर्न चाहन्छन्। त्यस्तै एक उदाहरण सेनोवल नामको कम्पनीको कहिल्यै अन्त्य नभएको स्प्याम हो।
यस फर्मले मालिसियस स्तरमा रेफरल स्पामहरूको एक ठूलो संख्या प्रस्तुत गरेको छ र तपाईंको कम्प्युटर अपहरणको लागि परिष्कृत भाइरसहरू र मालवेयर प्रयोग गर्दछ। यसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई मालिसियस यातायात पठाउँदछ, तर समान ट्रैफिक darodar.com रेफरल कार्यक्रमहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। यसैले, तपाइँ दुबै darodar.com र सेनोवल.ru बाट टाढा रहनु पर्छ, इन्टरनेटमा तपाइँको साइटको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै।
सामान्यतया, यी समस्याहरूसँग व्यवहार गर्न सबैभन्दा उपयुक्त, उत्तम र सस्तो तरिका फिल्टरहरू सिर्जना गर्नु हो। फिल्टरले तपाईंलाई तपाईंको गुगल एनालिटिक्स डाटामा स्प्यामबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं .htaccess फाईलमा सेटिंग्स परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यी दिनहरू, वेबमास्टरहरूले यी दुबै विकल्पहरू प्रयोग गर्दै छन् ह्याकरहरूलाई उनीहरूको संवेदनशील जानकारी चोर्नबाट रोक्न। तपाईं यी दुई विकल्पहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर म तपाईंलाई प्रत्येक वेबसाइटको लागि छुट्टै फिल्टरहरू सिर्जना गर्न सिफारिस गर्दछु। यी कुनै पनि तरिका प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको साइटको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस्।